Shiinaha Truck Side Mirror PK9468 Soo-saare iyo Badeecad | Buundada Galbeed
Muraayaddeenna rogidda waa mid ka mid ah qeybaha amniga ee jirka gaariga. PK9468 wuxuu ku habboon yahay jilayaasha Mercedes Benz MP3 taxane ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo xaalada wadada gaariga gadaashiisa iyo darawalku inuu ilaaliyo jirka oo dhan gaariga inta lagu gudajiro howsha wadista. Muraayadahayada muraayadaha indhaha waa qalab cusub.
Muraayaddeenna rogidda waa mid ka mid ah qeybaha amniga ee jirka gaariga. PK9438 wuxuu ku habboon yahay jilayaasha Mercedes Benz MP3 taxane ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo xaalada wadada gaariga gadaashiisa iyo darawalku inuu ilaaliyo jirka oo dhan gaariga inta lagu gudajiro howsha wadista. Muraayadahayada muraayadaha indhaha waa qalab cusub. Alaab-qeybiyahayagu waa inuu noqdaa mid u qalma ISO9001, badankoodna waa kuwa wax soo saarayaasha u qalma ee loo yaqaan 'TS16949'. Muraayadaha ayaa adeegsatay qalabka foorarsiga kulul ee caalamiga ah iyo qalabka wax lagu daboolo ee muraayadaha. Nidaamka naqshadeynta saddexda geesoodka ah iyo qalabka mashiinka mashiinka si buuxda oo otomaatig ah ayaa loogu isticmaalaa waxsoosaarka wax soo saarka. Inta badan waxsoosaarkeena waxaa loo dhoofiyaa dalal shisheeye waxayna ku riyaaqeen suuq rajo leh oo leh tayo sare, qiimo tartan iyo adeeg wanaagsan. Waxay noqon doontaa farxad noo ah inaan kuu soo qaadno qiimaha ugu fiican oo aan kuu fidino adeegga ugu fiican ee wax soo saarkeena.Qalabkeenna si weyn ayaa loo aqoonsan yahay laguna kalsoon yahay dadka isticmaala waxayna la kulmi karaan had iyo jeer isbeddelada baahiyaha dhaqaale iyo bulsho.Waxaan soo dhaweyneynaa macaamiil cusub iyo kuwa duug ah oo ka socda dhammaan qaybaha nolosha nala soo xiriir xiriirka ganacsi ee mustaqbalka iyo guusha labada dhinac!
PK MAYA PK9438
CODSIGA Mercedes Benz jilayaasha MP3 taxane ah
Tixraac OEM 9438110307
Hore: Muraayadda Truck Side PK9438
Xiga: Muraayadda Truck Side PK94PK9482
Muraayadda Side Truck PK9510